‘केसीलाई केही भए विश्वास तुहिन्छ’, उडेन सरकारी हेलिकोप्टर – Rajdhani Daily
‘केसीलाई केही भए विश्वास तुहिन्छ’, उडेन सरकारी हेलिकोप्टर
विगत १२ दिनदेखि चिकित्सा क्षेत्र सुधारको माग राखेर जुम्लामा आमरण अनशनरत डा. गोविन्द केसीले काठमाडौं जान इन्कार गरेका छन् ।स्वास्थ्यमा समस्या उत्पन्न हुन थालेपछि सरकारले हेलिकोप्टरमार्फत केसीलाई काठमाडौं ल्याउने प्रयास गरेको थियो । सरकारले आफ्नो मागको सम्बन्धमा कुनै सक्रियता नदेखाएको भन्दै केसीले जुम्ला छाड्न नमानेका हुन् ।
अनशनका कारण केसीलाई जुनसुकै बेला पनि आईसीयूमा राखेर उपचार गर्नुपर्ने अवस्था आउने चिकित्सकले चेतावनी दिन थालेका छन् । जुम्लामा आईसीयू र भेन्टिलेटरको व्यवस्था नभएपछि सरकारलेउनलाई काठमाडौं ल्याउने प्रयास गरेको थियो ।
यसअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले केसीसँग प्रत्यक्ष टेलिफोन संवाद गर्न चाहे पनि केसीले इन्कार गरेका थिए । उपचारका लागि काठमाडौंबाट आएको सरकारी डाक्टरको टोलीबाट पनि केसीले उपचार अस्वीकार गर्दै आएका छन् ।
सरकारले बुधबार हेलिकोप्टरको व्यवस्था गरेर डा. केसीलाई जुम्लाबाट काठमाडौं लैजाने अन्तिम तयारी गरेको थियो । केसीले जुम्ला छाड्न नचाहेपछि हेलिकोप्टर उडेन । ‘सरकार जसरी पनि केसीलाई काठमाडौं लैजान उद्दत देखियो,’ केसीका सहयोगी डा. प्रवीणकुमार गिरीले भने, ‘स्वास्थ्य अवस्था बिगँ्रदै गएकाले हामी पनि अन्तिम विकल्पको खोजीमा छौं । अन्तिम विकल्प भनेको उहाँलाई काठमाडौं लैजाने वा सरकारले वार्ताका लागि तत्परता देखाउने हो ।’
केसीले वार्ताबिना काठमाडौं नआउने बताएपछि सरकारलाई नैतिक दबाब परेको छ । उनका अनुसार अबको दुई÷चार दिन केसी जुम्लामै रहे स्वास्थ्यमा जे पनि हुन सक्छ । उता सरकारी चिकित्सकको टोेली जुम्ला आउने वा नआउने कुनै आधिकारिक जानकारी प्राप्त नभएको जुम्ला प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णु पौडलले बताएका छन् । ‘हामीले सुरक्षा दिएकै छौं, चिकित्सकलाई विशेष रूपमा निर्देशन दिएका छौं,’ प्रजिअ पौडेलले भने ।
अनशनरत डा. केसीले सरकारले आफ्ना माग सम्बोधन गर्नुपर्ने पहिलो अडान राख्दै माग पूरा नभएसम्म जुम्लामै मृत्युवरण गर्न तयार रहेको दोहो¥याएका छन् ।
केसीको माग सम्बोधन गर्न सरकारले वार्ता टोली गठन गर्न आनाकानी गरेको छ । केसीले अनशन त्यागेमा उनका माग सम्बोधन हुने सरकारले आश्वासन दिँदै आएको छ । स्वास्थ्य राज्यमन्त्री पद्मा अर्यालले अनशन छाडेर कानुनी बाटो अपनाए सरकारले डा. केसीको माग पूरा गर्ने बताइन् । ‘अनशन सुरु गरेदेखि नै डा. केसीलाई वार्तामा आउन आग्रह गरिएको हो, सुरुमा उहाँ आउन चाहनुभएन,’ राज्यमन्त्री अर्यालले भनिन्, ‘हिजोदेखि केही लचकतामा आउनुभएको छ, उहाँका मागप्रति सरकार गम्भीर छ, केही मागबारे विवाद छ, पक्ष र विपक्ष भएर समस्या समाधान हुँदैन, मैले भनेकै हुनुपर्छ भनेर पनि हुँदैन ।’
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (ने क पा) का स्थायी समिति सदस्य योगेश भट्टराईले डा. केसीलाई वार्तामा आउन आग्रह गरेका छन् । ‘गोविन्द केसीसँग बन्द कोठाभित्र होइन, खुला मञ्चमा बसेर वार्ता गर्न तयार छौं,’ नेता भट्टराईले भने, ‘सबै टेलिभिजन बोलाएर प्रत्यक्ष प्रसारण गर्दै वार्ता गरौं । यसका लागि अनशन तोड्नुस्, स्वस्थ हुनुस् ।’
यसैबीच, डा. गोविन्द केसीको समर्थनमा प्रदर्शन गर्दै आएका जुम्लाका महिलाले केसीको जीवन बचाइदिन सरकारसँग माग गरेका छन् । १२औं दिन बितिसक्दा पनि सरकारी प्रयासको अभाव र केसीको स्वास्थ्य अवस्थालाई मध्यनजर गरी बरु काठमाडौं लैजान माग गरेका हुन् ।
उनले चिकित्सकले दिने अत्यावश्यक औषधिसमेत अस्वीकार गरिरहेका छन् । प्रतिष्ठानमा विशेष उपकरण नभएको र जटिल उपचार पनि सम्भव नभएपछि डा. केसीको स्वास्थ्य गम्भीर बन्दै गएको हो । केसीको अनशनको समर्थनमा जुम्ला द्वन्द्वपीडित महिलादेखि दृष्टिविहीन महिला आन्दोलनमै छन् । आन्दोलनमा सहभागी द्वन्द्वपीडित महिला विष्णु उपाध्यायले भनिन्, ‘केसीलाई जुम्लामै मर्न नदिन पनि काठमाडौं लैजान उपयुक्त छ । उनलाई केही भए हामी जस्ता लाखौं नेपालीको आस मर्छ, विश्वास मर्छ । उपचार गरौं ।’
उता, केसीको स्वास्थ्य अवस्था बुभ्mन नेपाल मानव अधिकार संगठनको टोली जुम्लामा पुगेको छ । केसीको आन्दोलनमा समर्थन जनाउन जुम्ला पुगेका संगठनका अध्यक्ष अधिवक्ता इन्द्रप्रसाद अर्यालले जुम्ला रहँदा विभिन्न पक्षसँग छलफल गर्ने बताए । ‘हाम्रो उद्देश्य केसीको माग बुझाउने र समर्थन बढाउने हो,’ उनले भने ।